Batman: Arkham Underworld na-etinye gị n'ọrụ nke onye ọjọọ na-emebi Gotham | Androidsis
Gbanye na ya si ele onye ojoo anya na a akụkọ, nkiri ma ọ bụ video egwuregwu, ọ na-enye a ukwuu dịgasị iche iche nke nuances na pụrụ ọbụna ime ka anyị na-ahụ ihe mmadụ n'akụkụ nke na agwa onye na-abụkarị onye na-eweta "ezi ụmụ okorobịa" site na fim n'okporo ámá si obi ilu. Na ihe nkiri The Dark Knight, anyị nwere ike ịchọta mmadụ karịa Joker nke mara mbubreyo Heath Ledger bụ ụzọ pụrụ iche nke ọbụlagodi ịnwa ịghọta na ara nzuzu nke agwa akụkọ akụkọ a na-eburu ya yana site na akụkụ dị nro, anyị nwere ike bụrụ ihe na-atọ gị ụtọ n'oge ụfọdụ. Nke a anaghị eme na ndị ọzọ nke Batman fim, n'ihi ya, ọ bụ na-akpali nnọọ mmasị mgbe niile na-agakwuru ndị a ụzọ.
Ihe banyere Batman: Arkham Underworld, ọ bụ ezie ọ bụghị site n'akụkụ mmetụta ka ukwuu, ma site na nke anyị nwere ike imenye ụmụ amaala nke Gotham ụjọ mgbe anyị dị njikere ime ezigbo ihe ọjọọ. N'ebe a, anyị na-abanye n'ụzọ zuru ezu n'ime akụkọ banyere ndị na-eme ihe ọjọọ iji mezuo ọrụ na usoro aghụghọ ndị ọzọ, ebe "ndị dị mma" ga-anwa ịkwụsị ajọ omume anyị. A gbanwere ọrụ ndị a na egwuregwu vidio nke na-etu ọnụ maka ụdị njikwa njikwa dị mma nke na-eme ka ọtụtụ ndị egwu egwu na mbara ala.
1 Ndị villains na-enwekarị ọ funụ
2 Mepee ndi ojoo ojoo
Ndị villains na-enwekarị ọ funụ
Ọ fọrọ nke nta ka anyị kwenye nke ahụ banye n'ime akpụkpọ nke a villain O nwere ike bụrụ ihe na-atọ ọchị karịa ịbụ ezigbo mmadụ nke anyị maara na akụkọ ya ga-akwụsị. Ma ọ na-ewe ntutu na-acha odo odo ma ọ bụ na-ejedebe ịzọpụta ụwa site na mbibi nke onye ọjọọ kacha njọ niile chọrọ ime. Egwuregwu vidio nke na-eji otu n'ime akụkọ ifo na nke ọrụ gbanwere dịka Dungeon Keeper, na nke anyị nwere oge dị ukwuu na-echepụta otu esi abụ ihe ọjọọ niile.
Na Batman: Arkham Underwold ndị egwuregwu ga-agbanwe ịbụ Batman. Ndabere were anyịna otu eluigwe na ala dika aha Arkham mgbapu console, agbanyeghị na anyị na-agaghachi azụ afọ ole na ole tupu oge mbụ.
Ga-ejikwa ụfọdụ ihe odide Batman kacha mara amara, iji duzie gị site na akụkọ ndị na-echere gị na aha a nke nwere teknụzụ na eserese nwere ọtụtụ myirịta na ihe anyị nwere ike ịghọta dịka egwuregwu ụdị njikwa. Ka batrị dị njikere.
Mepee ndi ojoo ojoo
Ka anyị na-aga n’ihu n’akụkọ na-eche anyị n’ihu, anyị ga-enwe ike kpọghee ndị ọzọ villains nke egwuregwu a na egwuregwu mbụ n’ihi nuance nke inwe ike ịchịkwa baddest nke Gotham City. Ihe ọchị banyere egwuregwu ahụ bụ na ị ga-enwekwa ike edozi Batman mgbe ụfọdụ, ya mere, anyị nwere ọtụtụ ebumnuche dị iche iche ka anyị na-anụ ụtọ Batman: Arkham Underworld.
Egwuregwu nke egwuregwu ahụ na-adabere na ijikwa agwa na ịchọta ihe ga-abụ ụdị interface The Sims nke anyị ga-aga na-emelite ndị ọjọọ. Maka ndị maara ntakịrị bekee, olu ndị mbụ na-adọta anya na ihe osise 3D, ebe anya na-adọta, nwere ike ịbụ ntakịrị ihe.
Anyị na-echekwa mmelite ndị ahụ nke ntọala ahụ emeela ugboro ugboro na egwuregwu ndị ọzọ na na ebe a anyị hụrụ, ọ bụ ezie na isiokwu nke ndị na-eme ihe ọjọọ na Batman, ihe ga-adọta uche ọtụtụ ndị egwuregwu, ọ bụ ezie na ọ gaghị enwe ọtụtụ ndị ga-anọ mgbe emechara.
Egwuregwu dị n'efu ya na ọnọdụ freemium ahụ nke mmadụ niile maara.
Eserese gosipụtara ya mara ezigbo mmaMa mgbe ọ na-ekpughe, ọ nwere ike ịmalite iwe na omume. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ utu aha ya na teknụzụ na-amasị ya na karịa n'ihi isiokwu ọ na-emetụ. O nwere ike ịbụ nke ka mma, mana o nwere ntọala iweta Gotham City na ihuenyo anyị. Ga-enwe ụdị egwuregwu TellTale mgbe niile.
Batman: Arkham n'okpuru ụwa
Bụrụ onye ọjọọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Bibie n'okporo ámá nke Gotham ma tie Ọchịchịrị Ọchịchịrị na Batman: Arkham Underwold
Samsung Galaxy S8: 6GB nke RAM na ụbọchị ntọhapụ mbụ